Sharciga Xashiishka, Ma Imaanayaa Mise Maaha? • Dawooyinka Inc.eu
1 Dib u dhigista
2 Laba dhibaato
Sannadkii 2017, Golaha Wakiillada ayaa ansixiyay wax-ka-beddelka Xeerka Opium ee la xidhiidha u dulqaadashada beerashada iyo iibinta hemp iyo xashiish iyada oo loo marayo silsilad dukaan kafee ah oo xidhan. Sharciga D66, oo loo yaqaan 'Cannabis Act', ayaa la ansixiyay iyadoo 77 cod loo ogolaaday halka 72 laga soo horjeestay. Biilka ayaa markaa loo diray Senate-ka, halkaas oo dib loogu dhigay, maxaa yeelay D66 waxay hadda ku jirtay isbahaysi VVD, CDA iyo ChristenUnie. Halkii laga isticmaali lahaa Xeerka Xashiishadda, tijaabada waxaa lagu dhawaaqay silsilad dukaan kafee ah oo xiran, oo si fiican loogu yaqaan tijaabada xashiishka. Hirgelinta tijaabadan waxaa si firfircoon dib ugu dhacay sanadaha soo socda CDA iyo VVD.
Weli waxaan u arkaa wax aan la fahmi karin in xisbi leh khibrad maamul oo aad u badan sida D66 ay u ogolaatay laba wasiir oo ka socda xisbiyada kale (oo runtii ka soo horjeestay Xeerka Cannabis ee Golaha Wakiilada) inay masuul ka noqdaan fulinta tijaabada xashiishka. Natiijada? 4 sano kadib wali ma jiro warshad xashiishad ah dhulka.
2021, D66 waxay ku wargalisay Golaha Guurtida wax ku saabsan sida loo maareeyo biilka mar dambe dib u dhaca ku yimid tijaabada xashiishadda darteed. Wax badan ayaa dhacay ilaa waqtigaas. Golaha guurtida waxay dib u bilaabeen daaweynta muhiimka ah ee soo jeedinta iyo bilowgii Juun 2021 Wasiirka Daryeelka Caafimaadka iyo Ciyaaraha hala ogaado in dowladdu ay ka doorbideyso tijaabada xashiishka sharciga Cannabis ayna doorbideyso inay sugto natiijooyinka tijaabada ka hor intaan go'aan laga gaarin mustaqbalka siyaasada dulqaadka.
Dawladdu waxay tixgelineysaa kordhinta siyaasadda dulqaadka hadda ee loo maro Xeerka Xashiishadda mid aan waqtigeeda ku habboonayn oo aan loo baahnayn. Jawaab ahaan, D66 hala ogaado inay jeceshahay inay sii waddo ka doodista biilka waxyar ka dib fasaxa xagaaga.
Taasi way fiicantahay lafteeda, laakiin weli ma aanan arkin haddii daaweynta muhiimka ah ay imaaneyso. Fasaxa xagaaga kadib, D66 waxay kujirtaa xaalad la mid ah tii afar sano kahor; isbahaysi la leh VVD, CDA iyo mid ama in ka badan oo xisbiyo kale ah. Waxaa jirta fursad wanaagsan oo ah in biilka mar kale dib loo dhigo, iyadoo ay cadaadis ka imaanayaan VVD iyo CDA.
Haddii nuxurka biilku sidaa ahaataba laga wada hadlo, waxaan saadaalinayaa laba dhibaato, oo kala ah 1. qaab dhismeedka hadda ee Guurtida iyo 2. Nuxurka biilka.
Marka hore, waxaan la yaabanahay bal hadda ma jiraa aqlabiyadda biilkan guurtida, marka la eego sida hadda loo qaybsanayo kuraasta. Ka dib taageerayaasha (SP, D66, PvdA, PvdD, GroenLinks, 50PLUS) oo wadajira waxay leeyihiin 30 kursi aqalka Senate-ka. Kuwa markaa ka soo horjeeday (SGP, VVD, CDA, ChristenUnie iyo PVV) oo wada jir ah waxay ku leeyihiin 32 kursi aqalka Senate-ka. Kuraasta kale (Group Nanninga, FvD, Fraction Otten, OSF) marka la isku daro waxay leeyihiin 13 kursi. Si fiican looma oga waxa ay ka qabaan biilka xisbiyadaan cusub. Waxay u socon kartaa labada dhinacba, laakiin marka la eego saxiixa siyaasadeed ee xisbiyadan cusub, waxaan ka baqayaa inay inta badan ka tirsan yihiin xerada dadka ka soo horjeeda. Halkee D66 ka helayaa 8 kursi oo dheeri ah oo lagama maarmaan ah?
Marka labaad, waxaan la yaabanahay in biilku uu haysto fursad ku filan oo lagu guuleysto marka la eego waxa ku jira. Inta badan naqdinta biilku waa xaq. D66 waxay soo jeedineysaa in loo dulqaato beerista xashiishadda ee loogu talagalay madadaalada (sidaas awgeedna ku beerista xashiishadda maqaayadaha qaxwaha) qaab nidaamsan (iyadoo loo marayo go'aanka dulqaadka) halkii laga sharciyeyn lahaa sharciyeysan (iyada oo loo marayo ka dhaafitaan) U dulqaadashada abuurista xashiishadda ee loogu talagalay madaddaalada (oo markaa loo dulqaato beerista xashiishadda ee makhaayadaha kafeega) lama oggola heshiisyada daroogada ee caalamiga ah. Qodobbada ku jira soo jeedinta hindisaha D66 ee la xiriira u dulqaadashada beerashada xashiishadda ee makhaayadaha kafeega lama soo dejin karo, maxaa yeelay soo bandhigidda qodobbadaasi waxay ka hor imaanayaan dastuurka.
Qodobka 94aad ee dastuurka wuxuu dhigayaa in qawaaniinta qaanuuneed ee lagu dabakhi karo gudaha Boqortooyada aysan khuseyn doonin hadii codsigan uusan la jaan qaadi karin qodobada heshiisyada iyo go aanada ururada sharciga caalamiga ee qof walba ku qasban. Marka la soo koobo, sharci lama soo saari karo oo khilaafsan heshiisyada caalamiga ah (daroogada).
Horey tan ayaan u tilmaamay D66 sanadkii 2017, laakiin taas waqtigaas la iguma mahad celin. Dhowr dhinac (oo ay ku jiraan Golaha Gobolka iyo Adeegga Dacwad-qaadista Dadweynaha) ayaa isla wax isla soo sheegay. Kordhinta siyaasada dulqaadka ee ay soo jeedisay D66 uma muuqato xal macquul ah marka laga eego xaga sharciga. Taasi waxay ka dhigeysaa biilka mid aad u nugul.
Sida uu dhigayo sharciga caalamiga ah, waxaa macquul ah in wax laga badalo Sharciga Opium si loo abuuro xashiishadda loo isticmaalo madadaalada (sidaas darteedna beerashada xashiishadda ee maqaayadaha kafeega) si sharci ah ayaa loo sharciyeeyay iyada oo loo marayo nidaam xiran oo ka dhaafitaanno ah, iyadoo la tixgelinayo in wax ka beddelkan uu yahay oo ay weheliso siyaasad niyad jab firfircoon oo ka dhan ah xashiishka, oo loogu talagalay ka hortagga, ogaanshaha hore iyo daaweynta. Sharci ahaan sharciyeynta beerista xashiishadda ee loogu talagalay madadaalada (sidaas awgeedna ku beerista xashiishadda dukaamada kafeega), shuruudaha waxaa lagu soo rogi karaa habka wax soo saarka, asalka, halabuurka iyo tayada xashiishka. Tani waxay u horseedaa dhaawaca bulshada iyo bulshada ugu yar iyo qatar yar oo caafimaadka bulshada ah.
Wadamo kale ayaa iyaguna gaaray go'aankan waxayna sharciyeeyeen beerista iyo isticmaalka xashiishka, qayb ahaan sababtoo ah faa'iidooyinka dhaqaale, sida dakhliga canshuuraha ee dheeriga ah iyo shaqo badan. Waqtigan xaadirka ah, Nederland waxay ku sii socotaa dulqaadka, halka sharciyeynta ay si muuqata uga badan tahay intaas faa'iidooyin badan dalabyo. Siyaasadda dulqaadku waxay ka shaqeysay wixii laga filayay tobanaankii sano ee la soo dhaafay, laakiin hadda waxaa la joogaa waqtigii (geesinimada) la qaadi lahaa tallaabada xigta. Mar dambe ma awoodi karno inaan sii wadno dulqaadka, maxaa yeelay mustaqbalka fog tani ma bixinayso faa'iidooyin bulsho oo ku filan. Ka dibna golo wasiiro cusub ayaa go'aan ka gaari kara in la soo afjaro siyaasadda dulqaadka (hadda jirta).
sharciyeyntaNederlandsiyaasaddasharcigatijaabinta haramahabaaritaanka weed
Sharciyeynta Cannabis waxay kobcin kartaa dalxiiska Thailand
Thailand waa waddankii ugu horreeyay ee Koonfur-bari Aasiya ee sharciyeeya dhinacyo badan oo xashiishad ah: soo-saarkeeda, soo dejinteeda iyo and
Baadhitaanka Weed: meesha uu jiro qiiq, waxaa jira dab
Talaadadii, Janaayo 21, tijaabada xashiishadda, oo ah tijaabo ku saabsan abuurista xashiishka ee nidaamsan, ayaa heshay aqlabiyadda ...
Waxaa qoray mr Kaj Hollemans, KH Legal Advice (@ KHLA2014) Barta laga bilaabo siyaasada daroogada Nederland marwalba waxay ahayd: ...
Intee in le'eg ayay Delta 9 THC Gummies-ka ugu shaqeeyaan xanuunka?
Ketamine iyo teraabiyada cilminafsiga ayaa caawin kara khamriga
Cilmi-nafsiga maskaxda ee yar-yar ayaa kor u qaadi kara hal-abuurka?
Sidee ayahuasca u shaqeysaa sideese u kobcin kartaa noloshaada?
Isticmaalka xashiishadda ee soo noqnoqda ee la xidhiidha khatarta hoose ee xanuunka macaanka ee haweenka